Matanho 8 Ekuvaka Anobudirira Anosvika Kumapeji | Martech Zone
The kumhara peji ndeimwe yenheyo dzenheyo dzinobatsira mutengi wako kufamba nenzira yemutengi wavo. Asi chii chaizvo? Uye zvakanyanya kukosha, inganyatso kukura bhizinesi rako sei?
Kupfupisa, an inoshanda peji rekumhara yakagadzirirwa kugadzira anogona mutengi kutora matanho. Izvi zvinogona kunge zviri zvekunyorera kune email rondedzero, kunyoresa kune iri kuuya chiitiko, kana kutenga chigadzirwa kana sevhisi. Kunyange chinangwa chekutanga chingave chakasiyana, mhedzisiro yacho yakafanana. Uye ndiko kushandura mutengi kuva mutengi anobhadhara.
Izvozvi zvatatsanangura kuti peji rekumhara chii, ngatitaurei nezvezvinhu zvinoita kuti ive kumanikidza webhu dhizaini mhinduro. Heano matanho aunogona kuteedzera kuti yako yekumhara peji isagadzirike.
Nhanho 1: Tsanangura yako Target Vateereri
Usati watanga kunyora, unofanirwa kunge uine zano rakajeka rekuti vateereri vako ndevapi. Gadzira mutengi persona nekuzvipa zvimwe hunhu senge zera, murume kana murume, degree redzidzo, basa, mari yemwedzi, uye zvimwe.
Nekuita izvi, iwe unozogona kugadzirisa yako meseji zvakajeka, kugadzirisa yakatarwa marwadzo poindi, uye nekuratidza kubatsirwa kwechigadzirwa chako. Mushure mekutsanangudza vateereri vako, enda kunhanho inotevera.
Nhanho 2: Shandisa Mutemo wekudzokorodza
Nyanzvi dzezvepfungwa dzezvemagariro dzinotaura nezvechiitiko ichi sekuda-kudzika chishuwo chekudzorera mutsa chero nguva mumwe munhu akakuitira chinhu chakanaka. Sampuli yemahara, mushumo wakadzama, kana kunyangwe runyorwa rwekunyora runyoro ndizvo zvimwe zvezvipo zvinoshandiswa nemakambani kushandisa zvine hungwaru zano iri.
Saka ngatiti urikuedza tora email yemutengi kana kuti vaite kuti vanyore kune tsamba yekutumira. Iwe unogona kuvavimbisa chirevo chepamusoro-kukosha kuvakurudzira kutora danho. Uye kana iwe uchipa chimwe chinhu chakakosha, ipapo ivo vachatora kuti izvo iwe zvauri kupa zviri nani zvirinani.
Nhanho 3: Nyora Unomanikidza Musoro wenyaya uye Musoro wepamusoro
Musoro wenyaya ndiyo hoko yako huru yekudzosera mutengi mukati; musoro-wekutendeuka unobata kutarisa kwavo. Inofanirwa kuwana poindi yako zvakajeka uye zvakapfupika. Zvichakadaro, iwo musoro wepasi pasi unopa rumwe ruzivo nezve chako chigadzirwa kana sevhisi yekuita mutengi kugara uye kuziva zvimwe.
Paunenge uchinyora zvese zviri zviviri, gara uchishandura chimiro chako kuita bhenefiti. Semuenzaniso, kana uri kutengesa smartphone ine hupenyu hwakareba hwebhatiri, usataure nezve ayo mAh (milliampere-awa). Panzvimbo iyoyo, iti "Binge-tarisa yako yaunofarira Netflix show mune imwe nzira." Nenzira iyi, urikutaurira kuti chigadzirwa chingakanganisa sei hupenyu hwevateereri vako uye kugadzirisa imwe nzvimbo yekurwadziwa muhupenyu hwavo.
Nhanho 4: Ipa Ruzivo rweMagariro
Humbowo hwehukama chinhu chakakosha pane yako peji rekumhara sezvo zvichiratidza wako anogona mutengi kuti vanhu vari kutobatsirwa kubva kune chako chigadzirwa maficha.
88% yevatengi vanovimba mushandisi ongororo zvakanyanya sekurudziro yemunhu.
Saka edza kuwana zvipupuriro kubva kune vanofara vatengi uye tarisa yako yekushandura mwero kukwira kumusoro. Mushure mezvose, vanhu vanowanzo tevera boka. Uye kana boka rikagutsikana, vangangove vatengi vanozoedza kupinda muchiitiko kuti vave chikamu chechiitiko.
Nhanho 5: Kutaurirana Vistors 'Pain Points uye Maitiro Ekuvabvisa
Ngatitii uri kutengesa chirongwa chekudzidzira kumba kwevanotanga. Imwe yemarwadzo ako pano ndeyekuti mutengi wako anogona kunge aine chivimbo nenyaya dzinobva pakurema kwavo. Pamwe vari kunetsekana kukodzera mune zvipfeko zvavo uye izvi zvakakanganisa hupenyu hwavo hwemagariro.
Ikozvino, rako basa kugadzira peji yekumhara iyo inosimbisa iyi marwadzo pozoibvisa uchishandisa sevhisi yako. Musoro wako wenyaya unogona kutaridzika kunge:
Tora chimiro chinotyisa mukunyaradza kweimba yako wega. Or Gadzira iyo bodhi yegungwa kugadzirira zhizha.
Iwe unogona ipapo kutevera izvi kumusoro unokwezva musoro wepamusoro:
Iyi purogiramu yekudzidzira kumba yakagadzirirwa kukudzikisira pasi usingavimbe nemidziyo, mishonga, kana magumo ekupedzisira. Zvese zvaunoda inguva, kurudziro, uye kusagadzikana kugaya.
Nhanho 6: Tungamira Vashanyi Kune Iyo Kudana kune chiito
Mushure mekusanganisa zvinhu zvambotaurwa, inguva yekugadzira yako Kudana kuChiito. Inofanirwa kuve ipfupi, inoonekwa uye inoshandisa mutauro unonyengetedza. Ngatitaurei nepurogiramu yekudzidzira kumba semuenzaniso.
Panzvimbo pekugadzirisa generic bvuma bhatani kuti utore email yavo, unogona kuisipa nekutaura Joinha vashandi or Tanga kupisa mafuta iwayo nhasi. Iwe unofanirwa zvakare kushandisa inonyengedza mifananidzo kutungamira mutengi zvakananga kune yekufona-ku-chiito (CTA). Uyezve, shandisa mavara akasiyana kuti ubatsire ita kuti bhatani ribude.
Nhanho 7: Bvunzo, Bvunzo, Bvunzo… Zvese
Ehe, iwe uchiri kuda kuita A / B kuyedza kuti uwedzere yako shanduko yemitengo. Edza zvese ... kubva pane dhizaini maficha, mifananidzo, mafonti, misoro yenyaya, misoro mikuru, mifananidzo, mabhatani, kufonera-kune-zviito… zvese. Kuendesa zano rekumhara peji hakumbofi kwakakwana pasina nzira yekuyedza.
Kuyedza akawanda mapeji kune akasiyana ekutenga manas uye zvishandiso zvakare iri zano rakakura. Kana iri zano reB2B, semuenzaniso, iwe ungangoshuvira kuve neyako yekumhara peji inoenderana neyese indasitiri yaunoshandira. Kana kana iri peji rekutarisa rinotariswa nevatengi, iwe ungangoshuvira kuverengera zvirimo nemifananidzo nezera, murume kana mukadzi, nzvimbo.
Nhanho 8: Shandisa Iyo Inosvika Peji Peji
Kugadzira peji rinobudirira rekumhara hazvidi toni yekuedza kana nguva kana iwe uine chaiyo yekumhara peji mhinduro. Kumhara peji mhinduro zvinokugonesa iwe kuvaka yakanaka yekumhara mapeji nekwanisi yekudzokorora, kuyedza, kusanganisa, uye kugadzirisa zvisina basa.
Buda Instapage, iri nyore-kushandisa-kumhara peji mhinduro iyo inokupa simba iwe kushandisa iwo matipi kubva kuchinyorwa chino!
Kutanga Kuedza kana Tora Demo reInstapage
Kubva Kune Vangangoita Vatengi kuenda kuRaving Fans
Peji rinomanikidza rekumhara rinogona kuwedzera yako shanduko uye kubatsira kukura bhizinesi rako nekukurumidza. Nekutevera nhanho dzambotaurwa, iwe uchawedzera kushanda kweako peji rekumhara kubva pakuenda-uye kudzikisa nguva yekugadzirisa iyo kumusoro. Ingo rangarira kugara uchiisa kukosha pamusoro pezvese zvimwe uye iwe unozoshandura vangangove vatengi kuva vanopenga mafeni pasina nguva.
kuburitsa: Martech Zone mubatanidzwa we Instapage!
Tags: inoshanda peji rekumharaInstapagekumhara pejikumhara peji dhizainikumhara misoro yenyayakumhara peji nhanhokumhara peji matipimusoro wenyayaUchapupu
Iyo 2021 Dhijitari Kutaurirana Matanho ayo Anowedzera Bhizinesi Rako